Madaxweyne Farmaajo oo ka waramay booqashadii uu ku tagay Dalka Masar – fogaanarag
Somalia PM sacks three ministers as country battles insurgency
Ra'iisulwasaare Kheyre oo xilka ka qaaday wasiiraddii arrimaha gudaha iyo dibadda
U.S. says air strike kills two militants in Somalia
Al Shabaab kills five Kenyan policemen who were out on patrol
Ra'iisulwasaare Kheyre oo dhiiragaliyay ciidamo dhamaystay tababar + Sawirro
Wararka | By Jama
Madaxweyne Farmaajo oo ka waramay booqashadii uu ku tagay Dalka Masar
Muqdisho, Ogosto 22, 2017: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Faderaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray Xukuumadda in ay dabagal ku samayso sidii looga mira dhalin lahaa qorshayaashii ay isku soo afgarteen dowladda Masar.
Madaxweynaha oo shir Jaraa’id ku qabtay Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cabdulle ayaa sheegay in booqashada uu ku tagay dalka Masar ay ahayd mid mira dhal ah taasoo ka turjumeysa xiriirka qotoda dheer ee ka dhaxeeya labada dal.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka warbixiyey arrimaha ugu muhiimsan ee ay isku soo af-garteen dhiggiisa dalka Masar Mudane Cabdi Fataax Al-Siisi oo ay ka mid tahay xoojinta xiriirka labada dal, kordhinta deeqaha waxbarasho, tababarrada iyo tayeynta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed iyo horumarinta arrimaha dhaqaalaha.
Waxyaabaha kale ee isafgaradka laga gaaray waxaa kamid ah horumarinta ganacasiga, maalgalisha beeraha, kalluumeysiga, xoolaha iyo in muwaadiniinta Soomaaliyeed loo fududeeyo dal ku galka Masar.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan u direysa dalka Masar saraakiil gaaraya 15 oo ka tirsan Ciidanka Booliska kuwaas oo bilow u ah qorshaha dowladda Masar ay kaga qeyb qaadaneyso tayeynta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Wixii faahfaahin ah, fadlan kala xiriir
Cabdinuur Maxamed Axmed
Xafiiska Madaxweynaha JFS
Ra’iisulwasaare Kheyre oo xilka ka qaaday wasiiraddii arrimaha gudaha iyo dibadda
Ra’iisulwasaare Kheyre oo dhiiragaliyay ciidamo dhamaystay tababar + Sawirro
Sweden: Basas bilaa darawal ah oo ka howlgalaya waqooyiga Stockholm
Sweden: Dad laga helay cudurka faafa ee jadeecadda